XOGAHYAA GUUD EE QARAMADA MIDOOBAY OO WARBIXIN KA SOO SAARAY ARIMAHA SOMALIYA | Toggaherer's Weblog
MADAXWEYNE RIYAALE OO LA KULMAY WAFTI KA SOCDA UK ADISABABA
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon ayaa warbixin ka soo saaray xaalada dalka Soomaaliyo iyo qorshaha ciidamo u dirista dalka Soomaaliya.
Warbixinta xoghaya oo soo baxday maalintii Arbacada ahayd ayaa waxay ka soo horjeeday in ciidamo ka socda Qaramada Midoobay loo soo diro dalka Soomaaliya.
Mr. Ban ayaa ku tilmaamay meel khatar ay ka jirto dalka Soomaaliya taasoo sababi karta in ciidamada Qaramada Midoobay ee nabad ilaalinta la weeraro.
Ciidamo dirista bedelkeed Ban Ki Moon waxa uu ku taliyay in dhinacyo badan laga wajaho xaalada Soomaaliya, iyadoo laga bilaabayo ayuu yiri kor uqaadista taageerada ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afirka ee horey dalka uga hawlgalayay iyo xoojinta ciidamada ammaanka ee Soomaaliya.
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay oo cadaadis uga imanayay dalalka Afrika oo ku baaqayay in dalka Soomaaliya ay u soo diraan ciidamo nabad ilaalin ah ayaa si isku xig xigta dib u dhigay.
Waxaana qorshahaasi la rajeynayaa inay dib uga doodaan 1-June ee sanadkan.
Ban Ki-moon waxa uu hoosta ka xariiqay in xaalada hadda ka jirto Soomaaliya aanay ahayn mid saamaxeysa in la aqbalo ciidamo ka socda Qaramada Midoobay inay tagaan Soomaaliya.
Waxay noqon doontaa ayuu yiri khatar aad u sareysa oo ay cagaha la galaan ciidamada Qaramada Midoobay.
Ban Ki-moon waxa uu sheegay haddii ciidamo ka soda Qaramada Midoobay loo soo diro dalka Soomaaliya in taasi ay noqon doonto wax ay ku mar marsiyoodaan ciidamo mucaaradka ka soo horjeeda dowladda iyo joogitaanka ciidamada ajnabiga.
Waxayna u fasiri doonaan in ciidamada Qaramada Midoobay ay yihiin cadow ku soo duulay dalka, weerarona ku soo qaadi doonaan.
Ban Ki moon wuxuu ku taliyay in qorshaha ugu horeeyo uu noqdo in la taageero 4,500 ee askari sidii tiradooda loo gaarsiin lahaa 8,000 ee markii hore loogu talagalay.
Iyo in la taageero sidii ay awood jirta oo xoogan u noqon lahaayeen ciidamada ammaanka ee dalka Soomaaliya.
Qorshaha labaad ayuu xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon uu ku sheegay in Qaramada Midoobay marka ay aragto isbedel ku yimaada xaalada nabadgelyo ee gudaha Soomaaliya ay u soo dirto saraakiil.
Saraakiishaasi ayuu sheegay inay talooyin siin doonaan dowladda kmg ah iyo ciidamada Amisom.
Waxay kaloo saraakiishaasi la socon doonaan hawlaha gargaarka sidii si haboon loogu gaarsiin lahaa dadka u baahan.
Ban Ki moon wuxuu warbixintiisan ka soo hormariyay kulanka caalamiga ah ee dalalka deeq bixiyeyaashu ka yeelanayaan arrimaha Soomaaliya kaasoo maanta ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Biljim.
Ban Ki-moon ayaa ka qeyb geli doona kulanka magaalada Brussels.